Viber ကို PC ကနေ ခေါ်မယ် | အိမ့်မှူးသော်
အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတယ်နော် ။ ခေတ်နောက်ကျမကျန်ခဲ့လေအောင် သုံးကြစို့။ အဆင်ပြေတယ်ဗျာတကယ်။ ကျွန်တော် ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ်လိုက် ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သုံးလို့ရတယ်လို့ သူငယ်ချင်းကပြောပါတယ်။
ဖုန်းမရှိလို့ PC ကနေပဲ viber သုံးချင်သူများအတွက်ပါ။အရင်ဆုံး Bluestacks ကိုဒေါင်းထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင်အောက်က link မှာ video tutorial နဲ့ အဆင့်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြထားပါတယ်
How To Run Viber For PC
bluestacks ကို run ပြီးသွားရင် bluestacks ရဲ့ search box မှာ viber လို့ရိုက်ရှာလိုက်...အဲ့ဒါဆိုရင် viber ကိုတွေ့လိမ့်မယ်...ပြီးရင် viber ကို run လိုက်ပါ... ပြီးတာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းလိမ့်မယ်...အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဆီကို message တစ်စောင် code နံပါတ်ပေးဖို့ရောက်လာလိမ့်မယ်... အဲ့ဒီ code ကို ထည့်ပေးလိုက်...ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းကို viber to viber ခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီ။
လရိပ်အိမ် 8:55 AM
thantoeag 6:44 AM
အိမ့်မှူးသော် 5:47 PM
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ကျွန်တော်က 64-bit တင်ထားလို့ နည်းနည်းညှိနေတယ် အသေးစိတ်တင်ပေးဖို့က အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်. အစ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်လေးမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါနော်....အဲဒီဘလော့လေးမှာ အသေးစိတ် ရေးပြထားတယ်....
Zero 9:10 PM
searching လုပ်တာနဲ့ပဲ ရပ်နေတယ် ကျန်တာ ဘာမှ ဆက်မလာဘူးဖြစ်နေတယ် video file မှာ ပြထားတာက လွယ်တယ်နော် အခု လုပ်ကြည့်တော့ ဘာလိုနေလို့လဲမ သိဘူး လုပ်လို့ ကိုမရဘူး ဖြစ်နေတယ်
အိမ့်မှူးသော် 1:56 PM
အစ်ကိုရေ လာလည်လို့ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်အပေါ်က ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ။ အောက်ကပေးထားတဲ့ ဆိုးပေဆိုတဲ့ဘလော့လေးမှာ ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါနော်။ 64-bit ဆိုရင် နည်းနည်း error ရှိတယ်။ searching လုပ်နေတာကြာတယ်ဆိုရင် ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ စက်ကို restart ချပြီး ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါလား။
aung 3:40 AM
Viber For PC မှာမြန်မာဖောင့်ဘယ်လိုထည့်ရလဲမသိဘူးပြောပြပေးပါဦးနော်
THIHA 9:29 AM
viper account ကိုစမ်းသံးချင်ုလိုပါ.... နံပတ်ရှိရင် ပို့ပေါးလားခင်ဗျာ
မြန်မာစွန့်ဦးတီထွင်သူ လူငယ် 4:13 AM
နည်းပညာလေးတွေကို မျှဝေတာ တတ်ဖိုးရှိလို လာလည်တာပါဗျာ လေးစားပါတယ်.....တချို့စာမူတွေကိုလဲ ဖေါ်ပြခွင့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ် ခွင့်ပြုမယ်ဆို၇င်လေ ..ကျွန်တော် www.myanmarpioneeryouth.com ကပါ ဘယ်သူရေးတယ် ဘယ် ဆိုက်ကဆိုတာပါ လင့်ချိတ်ပြီးမူပိုင်ခွင့်ထားပေးမှာပါ .....
အိမ့်မှူးသော် 6:15 PM
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို....ကျွန်တော်ဘလော့ကနေ စိတ်ကြိုက်ဖော်ပြ နိုင် ပါတယ်။ လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်........လေးစားစွာဖြင့်.....
အကိုရေ---accept code က ဖုန်းနံပတ်ပေးထားတာတောင် ပြန်ပို့မပေးဘူး! ဘာမှားနေလို့လဲမသိဘူး! ကျန်တာအကုန်လုံး အဆင်ပြေပါတယ်---အဲဒါလေးတစ်ခုပါပဲ---
လရိပ်ပြာတဲ့ ည 10:18 PM
အကိုရေ ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာမှာ ဆော့ဝဲလ်ရမ်းလို့ မရဘူး။ 1GBပဲရှိလို့လား
မြန်မာဖောင့်ရအောင် လုပ်လို့ရလား အကို